Umsunguli we-Ethereum unikele nge-1 yezigidi zeedola kwi-COVID-19 yoNcedo loNcedo e-India
Umsunguli we-Billionaire we-Ethereum, uVitalik Buterin, uthathe izigqibo izolo ezibe negalelo elikhulu kwingozi yentengiso yakutshanje. U-Buterin wenza okungalindelekanga xa eqala ukuthengisa ezinye ze-ERC20 meme zemali ezithunyelwe kwisipaji sakhe ziiprojekthi ezithile zokufumana “Utshisiwe.”
Umsunguli we-crypto unikele ngemali eyi-1 yezigidigidi ze-Shiba Inu kwi-India ye-Crypto COVID Relief Fund, eyasekwa ngu-Sandeep Nailwal, umseki-mbumbano wePolygon, umgaqo wesibini wenkqubo ye-Ethereum. U-Buterin, uxelwe ukuba uphinde wanikela nge-3 yezigidi zeedola eDogecoin kulo mbutho wesisa kwiveki ephelileyo.
Umnikelo we-SHIB ngu-Buterin ngoku ngowona mkhulu ukuvela nakweyiphi na imali ye-cryptocurrency eya kuncedo lwe-COVID kwihlabathi liphela, iminikelo encinci evela ku-Justin Sun kunye no-Balaji Srinivasan.
Nangona kunjalo, isibhengezo sabangela ukwehla kwe-bearish kwi-SHIB kunye nezinye i-cryptocurrensets kwimarike yonke, kunye namalungu oluntu lwe-crypto abiza intshukumo njengendawo ephantsi kubathengisi.
Iminikelo engakumbi yesisa evela kuMsunguli we-Ethereum
U-Buterin akazange ayeke kumnikelo we-SHIB kodwa waya kulahla iziqwenga zezinye iimali zemali kwisipaji sakhe ukuze anyuse imali yeminye imibutho yesisa. Ingxelo yakhe yokuthengiselana ibonisa ukuba wanikela malunga ne-14,000 ETH (i-56 yezigidi zeedola) kwi-Givewell, iziko elingenzi nzuzo elihlawula izibonelelo zoncedo kwihlabathi liphela kwaye zabelane ngeminikelo esekwe kumanqaku alo.
U-Buterin wenze igalelo elibalulekileyo kwi-Gitcoin, eyaziwa ngokuxhasa ngemali iiprojekthi zesoftware evulekileyo, kunye neZiko loPhando loBuntlola.
Nangona kunjalo, emva kokuba umsunguli we-Ethereum ekhuphele uninzi lweemali ze-meme ezithunyelwe kwisipaji sakhe, iminikelo engaphezulu evela kwezinye iimali zemali ikhukule isikhwama sakhe se-crypto, ebonisa ukuba le ndlela intsha yokuqalisa iiprojekthi ze-cryptocurrency inokuqhubeka.
tags Cryptocurrency, iindaba, SHIBA, Vitalik Buterin